သူ နဲ့ ကျွန်မ – Hlataw.com
သူနဲ့ ကျွန်မ တစ်နှစ်ပြည့်တဲ့ နေ့ကပေါ့ ….. ဟိုတယ်မှာ တနေကုန် အချိန်ဖြုံးဖို့ ကြိုးစားခဲ့ကြသည်။ သူနဲ့ကျွန်မ ဟိုတယ် အခန်းထဲတွင် ချစ်သူရည်းစားတွေ မမြင်ကွယ်ရာမှာ ပြုလုပ်နေကျ အပြုအမူအတိုင်းပင် လုပ်ခဲ့ကြသည်။ သူကိုင်ထားတဲ့ ကျွန်မရဲ့ နို့သီးခေါင်းတွေ ကလဲ ထင်ထားတာထက် ထောင်နေခဲ့သည်။ သူက နီတာရဲ နို့သီးခေါင်းလေးကိုပွတ်ပေးလေလေ ကျွန်မရဲ့ စိတ်တွေလဲ လေရူးအတိုင်း ကမူးရှူးထိုး ဒယိန်းဒယိုင်ဖြစ်နေခဲ့သည်။ အသာအယာ ကိုင်ရင်း ပွတ်နေခဲ့တဲ့ သူ့လီးကိုလဲ ကျွန်မ အားရ ပါးရ စိတ်ပါ လက်ပါနဲ့ ချေလိုက်မိသည့်အခါတိုင်း အရမ်းကောင်းသွားတဲ့ အသံနဲ့ အော်နေတဲ့ သူ့အသံကို ကြားရတိုင်း စိတ်ကို မနည်းပင် ထိန်းထားရသည်။ချစ်စု ကိုအရမ်းကောင်းနေပြီ ဆိုတဲ့ အသံကို ကြားလိုက်ရတော့ အောက်က အကွဲလေးပါတဲ့ အဖုတ်လို့ခေါ်တဲ့ ဟာလေးက အလိုလို မသိမသာလဲ ထောင်တက်ရင်း ကြွတက်သွားသည်။ ချစ်စု မင်းလဲ ခံချင်နေပြီလား ကိုကတော့ မနေနိုင်တော့ဘူးကွာ။ မင်းအဖုတ်လေးထဲ ကို့လီးကို ထည့်ချင်လှပြီ။ ကျွန်မလဲ ကြာကြာတင်းမခံနိုင်ပါဘူး အင်းလေ ကို့သဘောပဲ ထည့်ချင်ရင် ထည့်ပေါ့ လို့ ပြန်ဖြေလိုက်ပါသော်လည်း အဖြေစကားသံ မဆုံးသေးခင့် သူ့ရဲ့ ၆ လက်မလောက် ရှည်တဲ့ လီးဟာ ကျွန်မ အဖုတ်ထဲ ထိုးဝင်သွားခဲ့လေပြီ ။ အားးးး ကျွန်မရဲ့ အသံ ထွက်သွားခဲ့သည်။ ချစ်စု ကိုတို့အခုဘာလုပ်နေတာလဲ တဲ့ သူက မေးသည် ကျွန်မ မဖြေပါ။ သူက မဖြေရမလားဆိုပြီး ကျွန်မကို ဆံပင် စောင့်ဆွဲပါသည်၊ အိုး နာတယ် ကိုရယ်။ နာရင်ဖြေလေကွာ မင်းနဲ့ ကို ဘာလုပ်နေတာလဲလို့။ ကိုကလဲ လိုးနေတာလေ။ ထပ်ပြော ထပ်ပြော ဆိုပြီး သူက ကျွန်မရဲ့ ဆံပင်တွေကို တင်းနေအောင် မလွှတ်ပဲ ဒလစပ် လိုးပါတော့သည်။
ကျွန်မလဲ အရမ်းကောင်းနေတဲ့ ဖီလင်နဲ့ နို့အကိုင် ခံချင်လွန်းလို့ ပက်လက် အလိုးခံရင်း နို့တွေကို ပွတ်ပြပါသည်။ သို့သော် သူက ကျွန်မဖြစ်ချင်နေတဲ့စိတ်ကို မလိုက်လျောခဲ့ပါ။ ချစ်စု မင်းနို့တွေ တင်းနေတာလား။ ဟုတ်တယ်ကို၊ အကိုင်ခံချင်နေလို့လား။ အင်းပေါ့ – ကိုက လိုးရင်းကိုင်ပေးလေ။ ဟင့်အင်း ကိုက မကိုင်ပေးဘူး ။ ။ သူနဲ့ကျွန်မ ဟိုတယ်ခန်းထဲက ကုတင်ပေါ်တွင် တစ်ချီပြီး နောက်တချီနဲ့ ကျွန်မသာ ပြီးသွားတယ် သူက မပြီး သေးဘူးမို့ သူနဲ့ကျွန်မ တော်တော်ကြာအောင် လိုးဖြစ်ခဲ့ကြသည်။ လိုးရင်း လိုးရင်းနဲ့ အရှိန်တက်လာတော့ ကို ရေ ချစ်စုလေ အားမရတော့ဘူး ကို့တစ်ယောက်တည်းနဲ့ ။ သူက ပြန်ပြောတယ် ဒီတော့ မင်းက ဘာဖြစ်ချင်တာ လဲတဲ့။ ချစ်စုလေ အခြားနောက်တစ်ယောက်နဲ့ နှစ်ယောက် လိုးတာကို ခံချင်လိုက်တာ။ အားးး ချစ်စုရယ် ထပ်ပြောပါဦး ကွာ။ အင်းလေ ချစ်စုက နှစ်ယောက်နဲ့ အားရပါးရ လိုးချင်တာသိလား။ ကို့တစ်ယောက်တည်းနဲ့ အားမရတော့ဘူး ။ကို – ချစ်စု ကို့ကို လိုးနေရင်းနဲ့ နောက်တစ်ယောက်ရဲ့ လီးကို စုတ်ချင်လိုက်တာ ။ အလိုက် သိတဲ့ သူက ကျွန်မ ပါးစပ်ထဲကို သူ့လက်ချောင်းတွေ ထည့်ပေးရင်း အဖုတ်ထဲမှာပေါ့ သူ့လီးကို ထုတ်လိုက် သွင်းလိုက်နဲ့ အသားကုန် အားရအောင် လိုးနေလေရဲ့။ ကျွန်မရဲ့ အရည်တွေ အဖြူဖတ်တွေက သူ့လီးမှာ ဖွေးလို့ပေါ့။ ဂျီလီသုတ်ပြီးမှ လိုးလို့ထင်ပါရဲ့ ချောချောမောမောနဲ့ အဖုတ်ထဲမှာ ဖီးအပြည့်ပဲ။ ချစ်စု မင်းက သိပ်လိုးလို့ကောင်းတယ်ကွာ။ စီးနေတာပဲ။ နေဦး အခု လိုးကောင်းနေကာမှ လီးက ပျော့သွားပြီ စုတ်ပေးဦးတဲ့… အဲဒါနဲ့ သူက ကျွန်မရဲ့အဖုတ်ထဲက လီးကို အတင်းဆွဲထုတ်လိုက်ပြီး ကျွန်မပါးစပ်ထဲကို တန်းထိသည်။
အိုးးး ကျွန်မ အငမ်းမရပဲ သူ့လီးကို စုတ်နေမိသည်။ ကျွန်မ သူ့လီးကို ကိုင်ပြီး စုတ်ရတာ ပိုကြိုက်တယ်။ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ သူ့ဂွေးဥလေးတွေကိုပါ လျှာနဲ့ လျက်ပေးလိုက်သည်။ နောက်တော့ သူက မတ်တပ်ရပ်သည် ကျွန်မက သူ့ရှေ့မှာ ဒူးထောက်ရင်း သူ့လီးကို ပယ်ပယ်နယ်နယ် အဆုံးထိရောက်အောင် စုတ်သည်။ ငုံသည် ။ အဲအချိန်မှာတော့ သူက အပေါ်ကနေ ကျွန်မရဲ့ ဆံပင်တွေကို စောင့်ဆွဲလျက်ပေါ့။ ကိုကလဲ ကျွန်မနဲ့တွေ့ဖို့ သူ့လီးကို ကြီးလာအောင် ကျင့်ထားတာတဲ့။ သူ့လီးကလဲ အားရစရာကောင်းလောက် အောင် လီးက တုတ်ပြီး ရှည်တယ် ပြီးတော့ မရိတ်ထားတဲ့အမွှေးတွေနဲ့ ….. ကျွန်မလေ သူ့လီးကိုမြင်တိုင်း ကျွန်မအဖုတ်နဲ့ ပါးစပ်ကို မနည်းနိုင်အောင် ထိန်းထားရတယ်။ ဘာ့ကြောင့်လဲဆိုတော့ မြင်တာနဲ့ မှုတ်ချင်တယ်။ အဖုတ်ကလဲ အလိုးခံချင်တယ်လေ။ သြော်ဒါနဲ့ အခုမှ ဇာတ်လမ်းက စတာသိလား ….. နောက်တကြိမ်လိုးဖို့ဆိုပြီး ကိုက ကျွန်မကို ဟိုတယ်အခန်းဝမှာ တံခါးကို အသာလေး ဟပြီး အဲနားမှာ ဖင်ထောင်ပြီးလိုးတယ်။ ကျွန်မလဲ အရမ်းလိုးခံလို့ကောင်းတာနဲ့ မရှက်နိုင်ဘဲ ပါးစပ်က အရသာအပြည့်နဲ့ အော်နေမိသည်။သူက တချက်စောင့်လိုးလိုက်တိုင်း အား အ အ ကော်ငးလိုက်တာ ကိုရယ် ကောင်းလိုက်တာ ကိုကလဲ ကျွန်မ အသံ သည်ထက် ပိုထွက်အောင် လီးကို အသားကုန် ဆောင့်ဆောင့်ပြီးလိုးတယ်။ ဒါကို တဖက် အခန်းက လူက အပြင်က ပြန်လာတော့ ကျွန်မတို့ လိုးနေတာကို မြင်သွားတယ်။ အား မိုက်တယ်ကွ တဲ့။ ပြောပြီး သူ့အခန်းထဲဝင်သွားတယ်။ သူ့ကို ကျွန်မတို့ ဂရုမစိုက်နိုင်ပဲ လိုးရင်း လိုးမြဲ ဆက်လိုးနေခဲ့ကြသည်။ ခဏကြာတော့ သူနဲ့ ကျွန်မ မောရင်း ကုတင်ပေါ်မှာ အတူတူ အိပ်ပျော်သွားခဲ့ကြသည်။ ချစ်စု ကိုအရမ်း မောသွားတယ် တညလုံး ကားလဲ စီးလာရတော့ မထောင်နိုငတော့ဘူး ကိုတရေးလောက် အိပ်ချင်တယ်တဲ့ ။ ပြောပြီး သူက ကုတင်ပေါ်မှာတင် အိပ်ပျော်သွားခဲ့သည်။ ကျွန်မလဲ ပျင်းပျင်းနဲ့ သဘတ်ကလေး ပတ်ပြီး ရေချိုးခန်းထဲ ၀င်ဖို့ ပြင်လိုက်သည်။ ရေချိုးခန်းနားရောက်တော့ စောစောက တခါးဝနားမှာ လိုးခဲ့တာကို အမှတ် ရပြီး ဖြတ်သွားတဲ့ ဟိုဖက်အခန်းက လူဝကြီးကို မြင်ယောင်မိသည်။
ကိုနဲ့ လိုးတာတောင် သည်လောက် ကောင်းရင် အဲလို လူဝကြီးနဲ့ လိုးရရင် ဘယ်လောက်မှာ အရသာအပြည့်ရှိမလဲလို့ ကျွန်မ တွေးရင်း ကြက်သီး တောင်ထသွားသည်။ ဟုတ်တယ် ကျွန်မ လူဝကြီးအခန်းရှေ့ကို သဘတ်ကလေး ပတ်ပြီး အသာအယာ ချောင်း ကြည့်မိသည်။ အောင်မလေး ကျွန်မ ရင်တွေတောင် တုန်သွားတယ် မောင်မင်းကြီးသားက အခန့်သား ဘောင်းဘီတို နဲ့ ရပ်စောင့်နေသည်။ ပြီးတော့ ကျွန်မကို ပြူံးပြသည်။ ငါသိတာပေါ့ မင်းထွက်လာမယ်ဆိုတာ လို့လဲ ပြောတယ်။ ကျွန်မက ရှက်ရှက်နဲ့ အခန်းထဲ ပြန်ဝင်မယ်လုပ်တော့ လူဝကြီးက ကျွန်မရဲ့ ခါးကို ကြပ်နေအောင်ဖတ်ပြီး သူ့အခန်းထဲကို ခေါ်သွားတယ်။အိုး ကျွန်မ ရင်တွေ တလှပ်လှပ် တုန်နေသည်။ သူတကယ်ပဲ လိုးတော့မှာလား ဒါမှမဟုတ် ညှင်းဆဲမှာလားလို့ပေါ့။ ကျွန်မ ကြောက်ကြောက်နဲ့ သူ့ ကုတင်ပေါ်တွေ သဘတ်ကလေး အုပ်ပြီး ရင်အုံဖွေးဖွေး ပေါင်တံ ဖွေးဖွေးဖြင့် ငြိမ်ငြိမ်ကလေး ထိုင်နေမိသည်။ မင်းက တော်တော်ရွတဲ့ မိန်းကလေးပဲ ငါက အဲဒါမျိုးကို တွေ့ချင်နေတာနဲ့ အတော်ပဲ။ မင်းက ငါလိုးတာကို ကြိုက်မှာသေချာပါတယ် ငါက မင်းအကောင် ထက် ကောင်းအောင်လိုးတက်ပါတယ် ဟုဆိုက ထိုင်နေတဲ့ ကျွန်မကို ကုတင်ပေါ် ကျောကျသွားအောင် တွန်းလှဲ လိုက်သည်။ ထိုအခါ ပက်လက်ဖြစ်သွားတဲ့ ကျွန်မရဲ့ ပေါင်နှစ်ချောင်းကို ဆွဲဖြဲပြီး သူက ကုတင်အောက်မှာ စောင့်ကျောင့် ထိုင်ပြီး ကျွန်မရဲ့ အဖုတ်ကို လျှာနဲ့ လျက်ပြီး မှုတ်ပေးပါရော …… အိုးးးး အရမ်းကောင်းတာပဲ ကျွန်မ ကောင်းနေတာ ကို သူသိအောင်လို့ အဖုတ်ကို အပေါ်ကို ကော့တက်နေအောင်ကို ငေါ့ပြလိုက်သည်။
အထာ ညက်တဲ့ လူဝကြိးကလဲ ကျွန်မအဖုတ်ကို လျက်ရင်းနဲ့ ကျွန်မ အစိတွေကို ပါ လက်နဲ့ကလိရင်း ကလိရင်း အဖုတ်ထဲကို လက်ထိပြီးမွှေပေးတယ်။ ကျွန်မ အရည်တွေ ကျလာပါရောလား။ ကျွန်မ အရမ်းဖီးတက်နေပြီ။ လူဝကြီးက ကုတင်စောင်းပေါ်မှာ ကျွန်မ ခါးကို ချပြီး ပေါင်နှစ်ခြမ်းဖြဲပြီး လိုးပါရောလေ။ အားအားအားဟု ကောင်းလွန်းလို့ အော်မိသည်။ လူဝကြီး၏ လီးသည် ကျွန်မ အဖုတ်ထဲကို ကြမ်းတမ်းစွာဝင်ခဲ့သည်။ ဂျယ်မသုံးပဲ ကျွန်မကို လိုးသည်။ ကြမ်းသည်။ တစောင်းလိုးသည်။ သူ့လီးကို ဆောင့်တာ ကြမ်းလွန်းသည် ။ ကျွန်မ အော်နေမိသည်။ မရပ်မနားပါပဲ။ သို့သော် သူ့လီး အဖုတ်ထဲက ထွက်သွားမှာကို ကျွန်မ လွန်စွာ ကြောက်နေမိသည်. ထို့ကြောင့် မအော်ပဲ အံတင်းထားမိသေးသည်။သူက ကျွန်မကို တိုးတိုးကလေး လိုးနေရင်း ကပ်ပြောတယ် ငါက မင်းစောက်ပတ်ကို လိုးနေတာ။ မင်းဘဲမသိအောင် မင်းကို ငါက ချနေတာ။ ချနေတာကွသိလား။ မင်းစောက်ပတ် ရွရွကလေးကို ငါက ကြမ်းကြမ်းလိုးနေတာ သိပ်အရသာရှိတာပဲ။ မင်းဘဲမသိအောင် ခိုးလိုးတာ ခံရတာရော မင်းမကောင်းဘူးလား။ ကျွန်မ က ပြန်ပြောပါတယ် အင်းကောင်းတယ်လို့ ဒါပေမယ့် ကျွန်မ အသံမထွက်နိုင်အောင် လိုးလို့အရမ်းကော်ငးနေတာ မို့ အင်း အင်း အင်း လို့သာ ထွက်နိုင်တော့သည်။ ကျွန်မရဲ့ နို့ထိပ်တွေကို ခပ်နာနာလေး ဆွဲကိုက်သည်။ အိုးးးးး ထိုသို့ အော်နေသည့်အချိန်တွင် အဖုတ်ထဲကို သူ့လီးက ဆောင့်ထည့်သည်. ပြီးတော့ သူ့ပါးစပ်ကပြောသည် လိုးရတာသိပ်အရသာရှိတာပဲတဲ့။ ထိုသို့ နှစ်ယောက်တည်း ကုတင်ပေါ်ပေါ်တွင် ကောင်းနေခိုက် တံခါး ဖွင့်သံကြားလိုက်ရသည်။
လူတစ်ယောက် ၀င်လာမှန်းကျွန်မသိသော်လည်း မည်သူမှန်း ကျွန်မ မမြင်ရချေ။ လူဝကြီး၏ ကိုယ်လုံးဖြင့် ကွယ်နေသည်။ လူဝ ကြီးဆီက မင်း ရောက်လာပြီလားဟု စကားသံထွက်လာမှ သူခေါ်ထားမှန်းသိလိုက်ရသည်။ အိုး ဘာလို့ခေါ်ထား တာလဲဆိုတဲ့အကြည့်နဲ့ လူဝကြီးကို ကျွန်မ ကြည့်မိတော့ လူဝကြီးက မင်းကို ပိုကောင်းစေချင်လို့ပါတဲ့။ ထို့နောက် နောက်မှဝင်လာတဲ့ သူက ကျွန်မကိုလိုးရတော့မယ် ဆိုတဲ့အသိနဲ့ ကျွန်မ တကိုယ်လုံးကို အငမ်းမရ ကြည့်ပါလောရော .. ပြီးတော့ သူ့လီး မည်းမည်းကြီး ထောင်နေတာကိုလဲ ပြသေးတယ်။ ကျွန်မလဲ ဘာမှ မတွေး နေနိုင်တော့ဘူး ။ လူဝကြီး လိုးရင်း တန်းလန်း ရပ်သွားတာကိုပဲ နာလိုခံပြင်း ဖြစ်နေမိသည်။ ကဲ – မရွှေကဲရေ မင်းကို ငါတို့နှစ်ယောက်က ရှယ်ပြုစုချင်လို့ပါ ကွာ ဆိုပြီး လူဝကြီးက ကျွန်မ ပါးစပ်ပေါက်ရှေ့ လီးတေ့ ပးတယ်။ ကျွန်မလဲ မငြင်းချင်ပါ။ ဒါ့ကြောင့် သူ့လီးကို ပါးစပ်ထဲထိဝင်အောင် မှုတ်ပေးလိုက်သည်။နောက်ဝင်လာတဲ့ သူကတော့ ကျွန်မ အဖုတ်ကို မှုတ်ပါလေရော။ ကျွန်မ အခုမှ ယောက်ျားနှစ်ယောက်နဲ့ လိုးရတဲ အရသာကို သိတော့တယ် အရမ်းကောင်းတာပဲ။ အောက်က တစ်ယောက်ကလဲ ကျွန်မ စိတ်တွေ မကြွ. ကြွအောင် စွပေး နေသလိုပဲ ဘယ်လိုမှ နေလို့မရအောင် ဖီးတက်လာတယ်။ ပါးစပ်ထဲမှာလဲ လူဝကြီးရဲ့ လီးရည်တွေက ရွှဲနေပြီ။ အောက်မှာလဲ ကျွန်မ စောက်ပတ်က အရည်တွေလဲ ကျကုန်ပြီ။ အဲဒီအချိန်ကျတော့မှ လူဝကြီးက နောက်တယောက်ရဲ့လီးကို ကိုင်ပြပြီး ကျွန်မ အဖုတ်ထဲ ထည့်မယ်ဆိုတဲ့အထာနဲ့ လုပ်ပြတယ် ကျွန်မ လဲ အင်း ဆိုပြီး ခေါင်းညိမ့်ပြတော့ .. ဟိုလူရဲ့ လီးက တစ်ရစ် ချင်း တစ်ရစ်ချင်း ကျွန်မအဖုတ်ထဲကို ၀င်နေသည်။ အဆုံးထိရောက်ခါနီးမှ ဆောင့်ထည့်လိုက်တဲ့အခါ ကျွန်မ တကိုယ်လုံး ကော့ပျန်သွားသည်။
ကဲ ကောင်းသလား မိရွှေကဲဟု ခေါ်ကာ ဆံပင်ဆွဲ၍ မေးသည်။ ကျွန်မလဲ နာကျင်မှုကြောင့် အဖြေပြန်မပေးနိုင်ပါ။ ဒါကို မဖြေရ ကောင်းလားဟုဆိုကာ ကျွန်မကို ပါးရိုက်သည်။ ထို့နောက် နာကျင်မှုကြောင့် စိတ်ကြွစေသည် ဆိုသည့် အတိုင်း ကျွန်မရဲ့ တင်ပါး တွေကို အသံအကျယ်ကြီးထွက်အောင် ရိုက်သည်။ နာကလည်း နာသည်။ လိုးလို့လဲ အရမ်ကောင်း တဲ့အခါ ကျွန်မ အသံ အကျယ်ကြီး ထွက်သွားသည်။ ဟိတ်ကောင်မလေး သိပ်မအော်နဲ့ ဟု ဆိုကာ ပါးရိုက်သည်။ ကျွန်မ အော်ပါသည်။ ငါပြောနေတယ်လေ ဟုဆိုကာ မအော်နိုင်အောင် ကျွန်မ ပါးစပ်ထဲကို လီးထည့်ထားသည်။ ပြီးတော့မှာ ဖင်ကို အသံထွက်အောင် ရိုက်သည် အော်သော်လည်း အသံ မထွက်တော့ ဟိုလူကလဲ အလိုးမရပ် လိုးရင်း လိုးရင်းဖြင့် စိတ်ထဲတွင် သူ့လီး ထွက်သွားမှာကို အရမ်းစိုးမိသည်။ သို့သော် ကျွန်မ မခံနိုင်တော့ပါ။ တကိုယ်လုံး ပျော့ဖတ်သွားသည် ဒါကို မရမကဖြင့် လူဝကြီးက ကုန်းခိုင်းသည်။ ကျွန်မ ကုန်းပေးသော်လည်း ဖင်က ထောင်မနေပဲ ကျ ကျသွားသည်။ မကျေနပ် တဲ့ လူဝကြီးက ကျွန်မကို ဆံပင်ဆွဲကာ ဖင်ကုန်းခိုင်းသည်။ခဏတော့ ကုန်း၍ ရလိုက်သည် အဲဒီအချိန်မှာ လူဝကြီးက အနောက်ကနေ လိုးသည်။ သို့သော် ကျွန်မ ခံနိုင်ရည်မရှိပဲ ပျော့ခွေနေသည် ဒါကို အ၇မ်းမရဖြင့် လူဝကြီးက ခါးကို ကိုင်၍ အဆက်မပျက် လိုးသည်။ နောက်တယောက်က ကျွန်မရဲ့ နို့သီးတွေကို မရမက ကုန်းစုတ်သည်။ ကျွန်မ မျက်စိတွေ ပျာဝေလာသည်။ သူတို့နှစ်ယောက် လိုးတာ တော်တော် ကြာသည်။ နားချိန်လဲ မရခဲ့။ အခုတော့ တကယ်ကို မခံနိုင်ပဲ မျော့သွားတော့သည်။ သူတို့ပြီးသွားပီထင်ပါတယ် ကျွန်မရဲ့ မျက်နှာပေါ် အရည်တွေ လောင်းချသည်။ လီး နှစ်ချောင်းလုံးထဲက အရည်တွေ ကျွန်မ မျက်နှာပေါ် ပမ်းချခဲ့ကြသည်။ ထို့နောက် ကျွန်မကို တရွတ်တိုက် ဆွဲခေါ်ကာ အခန်းရှေ့တွင် ချခဲ့ကြသည်။
ယိုင်နဲ့ နေတဲ့ ခန္ဒာနဲ့ ကျွန်မ အခန်းထဲထိရောက်အောင် ကျွန်မ တံခါး ဖွင့်ဝင်ခဲ့သည်။ နောက်တော့ ရေချိုးဇလုံထဲတွင် ကျွန်မ ရေစိမ်ရင်း သတိမေ့သွားသလား၊ အိပ်ပျော်သွားခဲ့သလား မသိတော့ပါ။ မျက်လုံးကို ဖွင့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါ ကျွန်မ နဲ့ ကျွန်မချစ်သူရဲ့ ကုတင်ပေါ်သို့ရောက်နေသည်။ အနားတွင် ကြင်နာစွာ ပြုစုနေသော ချစ်သူကို တွေ့လိုက်ရသည်။ ကျွန်မကို စိုက်ကြည့်နေသော သူ့မျက်လုံးတွေကို မြင်တော့ ကျွန်မ ၀မ်းနည်းစွာ ငိုကြွေးမိသည်။ မငိုပါနဲ့ကွာ မင်းနိုးအောင် ကိုစောင့်နေတာ။ ပြီးရင် ဆေးခန်းသွားမယ်ဟုဆိုကာ ကျွန်မကို အသာအယာ ပြောသည်။ ထို့နောက် အဆင်သင့်ရှိနေတဲ့ ရေကို တိုက်သည်။ ချစ်စုလေ ဟု အစချီကာ ပြောပြမည်အလုပ်တွင် ကျွန်မ နှုတ်ခမ်းလေးကို သူ့လက်ညှိုးလေးနဲ့ အသာဖိရင်း ခေါင်းယမ်းပြသည်။ မပြောနဲ့ ဟု အဓိပယ်ရသော်လည်း။ သိပြီးသားလော . မသိချင်ဘူးလော ………. ထို့နောက် ဆေးခန်းက အပြန် ညနေခင်း မှာတော့ သူနှင့် ကျွန်မ တစ်ယောက်လက်ကို တစ်ယောက် ယှက်လျက် … ဆည်းဆာကို လက်ပြနှုတ်ဆက်ခဲ့ကြပါသည်။ *ပြီးပါပြီ